ADUUNKU WAA IN UU HELAA NABAD – hogaanka.org
Caawi dadkaga abooruhu wax yeeleeyeen!
ADUUNKU WAA IN UU HELAA NABAD
Caalamka waxaa horumarkiisu ku xidhan yahay nabada oo lagu wada noolaado,is jeceylka dad yowga kala duwan,iskaaga iyo wada noolaansho fiican,xoriyada fikirka,hadalka,iyo wanaaga.
Dadku waxay ka wada yimaadeen Abo iyo hooyo keliya,waxay dhasheen iyaga oo xora,oo ku hadaqaya haaaaaaa……..Waxaanay u soo baxeen ifka iyaga oo u baahan caawimada waalidkood,walaalahood,jaarkooda,magaalada,ama tuulada ay ku soo biireen,dawladooda,dawladaha caalamka,cadaalad iyo nabadgelyo.
Nabadu waa garashada wanaagsan ee xuquuda noolaanshaha ee adamiga.
waa in la ilaaliyaa caruurta yaryar,dadka waayeelka ah,dadka xanuunadu haleeleen dumarka iyo dhamaan dadka iyo duunyadaba.
Caawi dadkaga abooruhu wax yeeleeyeen! Previous
MAANTA WAA MAALINTII HAWEENKA ADUUNKA Next